धुनिबेँसी नगरले खनेको खाडलमा परी एक बालकको अकालमै ज्यान गयो « News24 : Premium News Channel
धुनिबेँसी नगरले खनेको खाडलमा परी एक बालकको अकालमै ज्यान गयो
धादिङ, ३ जेठ । जिल्लाकाे धुनिबेँसी नगरपालिका वडा नं. ५ र ८ को सीमामा बग्ने महेश खोलामा धुनिबेँसी नगरपालिकाले खनेको खाडलमा डुबेर १४ वर्षीय बालक निश्चल रेग्मीको ज्यान गएको छ ।
बुधबार दिउँसो चर्को घाम लागेपछि ४ बालक स्थानीय महेश खोलामा नुहाउन भनेर लागेका थिए । उनीहरू नुहाउन साबुन लागएर खोलामा बसे, चारमध्ये निश्चल एक्कासि गायब भएपछि साथीहरु पनि रन्भुल्लमा परे । पिसाब आयो भनेको सुनेका साथीहरू बाहिर नदेखेपछि उनीहरु दायाँबायाँ हेर्नतर्फ लागे । दायाँबायाँ पनि नदेखेपछि पोखरीमा हेरे, त्यहाँ डुबिरहेका निश्चललाई बचाउन हारगुहार गरे । तर कोही आएनन् ।
काेही नआएपछि ३ बालकले साथीलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर बाहिर निकाले । तर त्यतिखेर निश्चलको ज्यान गैसकेको थियो । अहिले पनि निश्चलका साथीहरु उनलाई सम्झँदै रुँदै टाउको ठोक्ने र भावविहलमा मुद्रामा छन् ।
निश्चलका बुबा निरञ्जन रेग्मी घरको आँगनमा ४ दाजु-भाईलाई देखेर कामको सिलसिलामा वाहिर निक्लेको केही समय मै छोरोको खबर सुन्दा छागाबाट खसे । बुबा निरञ्जन इटा भट्टा मजदुरहरुको व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ भनेर खानीखोलामा छलफलमा आउन तयारी अवस्थामा थिए । कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारले चैत्र ११ गते देखी गरेको लकडाउनको कारण भट्टा मजदुरहरु विचल्लीमा छन् ।
धादिङ्ग इटा भट्टा संघका अध्यक्ष समेत रहेका रेग्मी भट्टा मजदुरकाे पीडा र छोराकाे वियोगले भावविहल छन् । सबैको मन कुँडिएको छ यतिखेर । एक छोरा र एक छोरी सन्तानको बुबा छोरा गुमाउनुपर्दा उनी छिन छिनमा भकानिन्छन् । निश्चलकी आमा नानु रेग्मीको अवस्था झनै हेरी नसक्नु छ, छोराको वियोगले वेहोस छिन् । वहिनी निकिता पनि दाजुलाई सम्झँदै डाँको छोड्दै रुँदै टोलाउछिन् । लाउँलाउँ खाउँखाउँ भन्ने उमेरकाे बालक अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दा परिवार मात्र होइन, पुरा टोल यतिखेर शाेकमा डुबेको छ ।
धुनिबेँसी नगरपालिकाले विकासको नाममा महेश खोला दोहन गर्दाको परिणाम हो यो । नगरपालिकाले धार्के-सितापाईला सडक ग्राभेलका लागि उसले करको नाममा रू १२ सय प्रतिटिपरका दरले ठेकेदारलाई बिक्री गरेको छ ।
नगरपालिकाले खनेको खाडलमा डुबेर बालकको ज्यान गएपछि नगरपालिका पन्छिन खोज्दै छ । धुनिबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय गोविन्द सिग्देलले खोलाबाट ग्राभेल झिक्ने कुनै निर्णय नभएको र बद्रिटारमा ढिस्को झिक्ने मात्र कार्यपालिकाले निर्णय गरेको बताए ।
उता नगरप्रमुख बालकृष्ण आचार्यसंग तपाईले निणर्यको माइनुट लिनुभएको छ रे, खोलामा ग्राभेल झिक्ने निर्णय भएको हो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ ।’ ग्राभेल झिक्ने र हाल्ने सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको उनले बताए ।
अनि ग्राभेल झिकेको खाल्डोमा परी एक बालकको ज्यान गएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा नगरप्रमुख आचार्यले भने, ‘मलाई केही थाहा छैन । यसबारे बुझ्नु पर्ला ।’ नगर प्रमुखको गैरजिम्मेवार जवाफले नै थाहा हुन्छ कि खोला दोहनमा ठेकेदारसंग कति मिले मतो छ भनेर ।
नेपाल सरकारको नियममा ९० सेन्टिमिटर मात्र ग्राभेल झिक्न पाउने अधिकार छ, स्थानीय तहलाई । तर धुनिबेँसी नगरपालिकाले १० फिटदेखि १६ फिटसम्म गहिराइ बनाएर खाडल खनेको छ ।
नगर प्रमुख आचार्य बालकको अन्तेष्टिमा भने घाटमा पुगेका थिए । तर नगरपालिकाले खनेको खाडलमा डुबेर ज्यान गएको भन्ने थाहै हुँदा पनि उनी ‘बुझ्नु छ’ भदै पन्छिनुकाे के अर्थ ?